नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान आजबाट सुरु: कसले लगाउने, कसले नलगाउने ? - Shikhar Post Shikhar Post
नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान आजबाट सुरु: कसले लगाउने, कसले नलगाउने ?
१४ माघ, काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान आजबाट सुरु हुँदै छ । कोरोनाविरुद्धको अभियानमा अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई पहिलो चरणमा खोप दिइने छ । विहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रुपमा एकैपटक काठमाडौंका ११ वटा अस्पतालमा खोप अभियानको शुभारम्भ गर्ने छन् ।
प्रकाशित मिति : बुधबार, १४ माघ २०७७ १०:१७